Wasiirka Caafimaadku Muxuu Dhaafsaday Isbedelkii Cisbitaalka Burco Ee Bulshadu Sugaysay ?
Mushaarka dhakhatiirta reer Burco $300 ilaa $500dollar, halka dhakhatiirta wasiirka hormarinta caafimaadku wato mushaar ahaan u qataan $1000 ilaa $1200dollar Hospitalka weyn ee Burco??? Cusbitaalka weyn ee Burco wuxuu hab aan waafaqsanyn nidaamka shaqalaysiinta, baalmarsan u shaqaalaysiiyay 2dhakhtar ka mida qoyska wasiirka hormarinta caafimaadka lagana keeney Boorama. Iyada boqolaal dhakhatiira Magaalada Burco bilaa shaqo ku yihiin badan kooduna ka soo baxey Jamacada Burco.
Labadan Dhakhtar waxay mushaar ahaan uqataan 1200dollar, halka kale 1000dollar, u qaato. lamana garanayo shaqo saxa oo ay ka qabtaan hospitalka lakin waa shaqsiyaad dusha lagaga keeney, halka Dhakhtiirtii hore ugu shaqeyn jirtey hospitalka Burco, mushaar ahaan u qataan $300 ilaa $500dollar, isku goobna ay ka shaqeeyaan. #1 dhakhtarka Labaad waxa uu shaqada u galaa habeen dhaaf waxa uu mushaar u qataa 1000dollar, (15habeen) halka Dhakhtar kale isbedelaan reer Burco mushaar uqataan inta u dhaxeysa 300 ilaa 500dollar, hase ahaate waxaa la yaab Ma jiraan wax ilaa hadda cadeynaya sababta dhakhtarka habeenki kaliya shaqeeya lacag intaas leeg loogu qoray.
Nidaamka shaqaalaysiinta uu ku suntan yahay cusbitaalka weyn ee burco waxa uu u baahan yahay in dawladdu ka war hayso umadana loo cadaalad sameeyo.
2. Waxaa jira dhakhtar kale oo isna ka yimid BOORAMA oo uu toos ugu soo cumaamaday wasiirka caafimaadka madama ay qaraabo yihiin Dhakhtarka. Haddaba waxa is weydiin leh siday noo sheegen hawl wadeenada caafimaadka uu la hawl galo in an dhakhtarkani wax daawo ah ka qorin isla markaaana uu yimaado gacmahana jeebka gashado, waqtiyada shaqadu socotana aanu hal bukaaan eegin isagoo yidhaahda inta badan anigu maamul ahaan baan idinkula shaqeynaya.
Arrinkaas werwer ku abuuray dhamaan shaqaalo weynaha cusbitaalka guud ee burco ma jirto cid xaqiijin karta shahadada uu sito, dhakhtarkani madama aan wali uu samayn wax dawo qorisa, Dhakhtarkan waxa uu ka cudur daartay in uu fadhiisto bukaan socodka si uu u arko bukaano kala duwan, Mushahar ahaan wuxuu qaata $1200dollar.
Hospitalka Burco ayaa noqdey meel wasiirka hormarinta caafimaadka lagu raali galiyo, qoyskiisa & inamada ay isku xaafada yihiin lagu shaqaaleysiiyo si agaasimaha hospital loo badelin. Hadiiba ay jirtey cid u hanqal taageysey xilka agaasimaha hospitalka Burco, ha ka samirto, waa la is faro gaadhey. #Ahmed_Muse halkan hoose sawirkiisu idin ka muuqdo waxa ka baxey 3sano ka hor jamacada Burco, waaan ardeygii ugu sareysey, halka Jamacada dalka oo dhan 5qof ugu sareeya ka mid ahaa (Burco, Hargeysa & Boorama).
mudo dheer ayuu hospitalka Burco bilaash ugu shaqeynayey. Hadeerna dhawr boqol oo caal waaya ayuu qataa, Sxbkey Ahmed Wasiir la, aan ayaa halkaas dhigtey.
Somali Activist Nouman M Muse Wabilaahi tawfiiq